HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United oo xiiseyneysa saxiixa Dejan Kulusevski
April 9, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso saxiixa weeraryahanka Juventus Dejan Kulusevski .
20 jirkaan ayaa si joogta ah ugu ciyaarayay Old Lady intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo saftay 37 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay shan gool iyo afar caawiye.
Kulusevski ayaa Juve kaga soo biiray Atalanta BC bishii Janaayo 2020, laakiin wuxuu xilli ciyaareedkii 2019-20 amaah ku qaatay Parma, isagoo dhaliyay 10 gool, sagaalna caawiye ka ahaa intii lagu jiray riwaayad cajiib ah.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Man United ayaa diyaar u ah inay baarto suurtagalnimada ay kula soo saxiixan karto xiddiga reer Sweden inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Sikastaba, saxafiga Daniele Longo ayaa sheegay in kooxda heysata horyaalka talyaaniga aysan hada xiiseyneynin in wiilkaan uu ka tago Turin.
Kulusevski, oo inta badan u ciyaarayay dhanka garabka midig ee heerka kooxeed xilli ciyaareedkan, ayaa qandaraas kula jira kooxda Andrea Pirlo ilaa iyo xagaaga 2025.